I-Recipe Pizza kunye netyhuna kunye ne-anyanisi
I-pizza kunye neTyhuna i-Pizza kunye neTyhuna inomdla oqhelekileyo kunye nephunga elimnandi-inqabileyo, i-fishy. I-Tuna kunye ne-mozzarella isasazeka phezu kwee-anyanisi, okwenza kube lula ukuyisebenzisa kwifom yayo eluhlaza. Ukuzaliswa ngokubhaka "kudibanisa" kwisinye esinqabileyo. Ukulungiselela i-pizza, ungathabatha ityhunti enqabileyo njenge-chopped, kunye neengcezu, kodwa uhlambulule ngemfoloko. Kwimeko nayiphi na into, i juisi okanye ioli kufuneka ichithwe, kukulungele ukufakela okubhaliweyo kwimbali kwi-strainer.
Ukhula, ingqolowa ye 350 g
Ishukela 3 g
Ioli yeoliyi 50 ml
Imvubelo, yomile 7 g
Amanzi 240 ml
I-tuna yamathanga 1 inako
I-Mozzarella ushizi 100 g
Utamatisi 1 pc.
I-anyanisi ebomvu 60 g
ImiNquma ngaphandle kwembewu 40 g
Umxube weeItribhi 2 g
I-anyanisi eluhlaza 20 g
Inyathelo 1 Lungisa iimveliso eziyimfuneko: 200 g ye-poda elungiselelwe ngaphambili ye-pizza, i-mozzarella, i-anyanisi, inokuthi ityhunti enqiniweyo, itamatato, iminqumo.
Inyathelo 2 Lubhala ifom ngeoli yeoli, uchithe umgubo. Ukutshatyalaliswa ngokusasaza umgca omncinci wenhlama. Ukupakisha ngemfoloko kwiindawo ezininzi. Kwintlama ifake i-anyanisi ehlanjululweyo kunye necwecwe.
Inyathelo lesi-3 Beka iinqununu ze-tanki ngaphezulu kwe-anyanisi, zisasaze ngokulinganayo.
Isinyathelo 4 Geza i-tomato, uthathe amathanga amancinci, ubeke phezulu.
Inyathelo lesi-5 Hlala ngokukhawuleza nge-mozzarella egayiweyo, ubeke isigxina seminquma, ufefe ngomxube wee-Italian.
Inyathelo 6 Bhaka imizuzu eyi-15 kwi-250 ° C. I-pizza kufuneka ifakwe kwihovini elifudumele. Ngaphambi kokukhonza, ufafaza i-pizza nge-anyanisi eluhlaza.
Burrito kunye nenyama kunye ne-avocado
Ingcamango yendlu yekhaya kwindlela yamaSoviet
Ukupheka kwee saladi ezihlwaya kakhulu
Ukungasebenzi kweplastiki yeenkwenkwezi
Amachiza amatsha nge-cystic fibrosis
Inyama eneinanayi, ibhaka kwi-oven, iresiphi ngesithombe